सिसहनियाँ उद्योग बाणिज्य संघले खौराहा बाबा धार्मिक स्थलमा घण्टी अनावरण « Tulsipur Khabar
सिसहनिया २६, पुस । धार्मीक पर्यटनको विकासका लागि सिसहनियाँ उद्योग बाणिज्य संघले खौराहा बाबा धार्मिक स्थलमा घण्टी राखिएको छ । धार्मिक स्थानको पर्बधन गरौ स्थानिय स्तरका पर्यटकीय स्थलको विकास गरौ भन्ने उदेश्यले राप्ती गाउँपालिका वडा नं ५ कालापानीमा पर्ने खौराहा बाबा धार्मिक स्थलमा १५ किलोको घण्टी राखीएको हो ।
राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष जगदम्वा कुमारी चौधरीको अध्यक्षतामा भएको पितलको घण्टी अनावरण कार्यक्रममा आगामी दिनमा सो क्षेत्रको विकासमा स्थानिय सरकारको पुनः आर्थिक सहयोग रहेने वडा नं ५ का वडा अध्यक्ष गोवर्धन रावतले बताउनु भएको छ ।सिसहनियाँ उद्योग बाणिज्य संघले खौराहा बाबा धार्मीक पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि स्थानिय सहयोग दाता, धार्मिक ब्यत्तित्व, संघ संस्थाहरुको सहयोगमा मन्दिर निर्माण, पोखरि विस्तार, पीकनिक स्थालको विकास, पीउने पानीको ब्यवस्था गर्न सफल भएको महासचिव ईश्वरी अधिकारीले बताउनु भएको छ ।
पितलको घण्टी अनावरण कार्यक्रममा मन्दिर परिसरको सरसफाई, पोखरी सरसफाई सहित स्थानिय वन समुहलाई धार्मीक स्थलको सुरक्षाका लागि सहयोग समेत गरिने संघ का सचिव मदन पोख्रेलले बताउनु भएको छ ।
कहाँ छ ? मन्दिर,
माघी स्नानको अवसरमा भब्य मेला लाग्ने यो स्थानको अवलोकन तथा कुण्ड स्नान गर्नाले छाला सम्वन्धि रोग हराउने विश्वास छ । कालापानी सामुदायिक वनको संरक्षण तथा खौराहा बाबा धार्मीक पर्यटकीय स्थल सञ्चालन समिति लगायत समुहहरुको संरक्षणमा रहेको धार्मीक पर्यटकीय स्थलको विकासको लागि स्थानीय नागरिक, साविक गाविस र हाल गाउँपालिका लागि परेको छ । यस्तो रमणिय स्थानको तपाई हामी पनी अवलोकन गरि धार्मीक आस्था र विस्वास र पर्यटकीय भावनाको विकास गर्न
एकपटक जाने कि ? कसरी पुग्ने ?
यो महाभारत पहाडको फेदिमा पर्ने यो खौराहा बाबा धार्मीक पर्यटकीय स्थल सिसहनिया बजारदेखि करिब १.५ किलोमिटर उत्तरमा राप्ती गाउँपालिकाबाट जान सकिन्छ । वडा ५ मा पर्ने भएकोले त्यहाँका वडा अध्यक्ष वा स्थानियका सहयोगमा टाढाबाट पनि घुम्न आउन सकिन्छ ।सिसहनिया बजार देखी उत्तर करिव १।५ किलोमिटको दुरीमा यो स्थान रहेको छ । स्थानिय उब्जाउ, खानपान रहनसहन तथा प्राकृतिक धनी भएकोले थोरै खर्चमा धेरै आनन्द मनोरञ्जन लिन सकिन्छ ।